Lalao Board, lalao karatra, milalao karatra, kely - Hicreate
Mba ho Mpanamboatra lalao ambony indrindra eto amin'izao tontolo izao
Jiangsu Hicreate Entertainment Co., LTD.Niorina tamin'ny taona 2015 ho toy ny mpanamboatra boardgame sy lalao karatra, manampahaizana manokana amin'ny fikarohana, fampivelarana, famokarana ary fivarotana ny karazana kilalao rehetra, lalao karatra, ary ireo singa mifandraika amin'ny lalao toy ny pawn, miniature ary dice. Manana ny ekipanay manokana izahay. ary ekipa serivisy izay afaka manompo ny mpanjifa manerantany.Ny filozofiantsika dia: manome serivisy tokana ho an'ny lalao board, manatanteraka ny famoronana anao. Ny tanjonay dia ny ho mpanamboatra lalao board ambony indrindra eran'izao tontolo izao! Tongasoa eto amin'ny orinasanay ary manorina fifandraisana ara-barotra amin'ny orinasanay.
Notarihin'ny fanavaozana, lasa Orinasa Benchmark ao amin'ny Indostrian'ny lalao Board Maneran-tany
Famokarana henjana sy fenitry ny fikarohana, nahazo fiarovana maromaro, fiarovana ny tontolo iainana, taratasy fanamarinana patanty
Mifototra amin'ny herin'ny Siansa sy ny Teknolojia, Mba hahatratrarana ny famokarana mandeha ho azy tanteraka
Eritrereto izay tadiavin'ny mpanjifa, mamorona lalao an-databatra malaza isan-karazany, mitombo hatrany ny lazan'ny mpilalao
Mahatonga ny ankizy ho hendry kokoa ve ny lalao board?Ny lalao board ho an'ny ankizy dia miha-malaza amin'ny ray aman-dreny sy ny ankizy.Misy mihevitra fa ny lalao board fianakaviana dia afaka mitondra soa maro.Misy anefa milaza fa ampitomboina ny asany.Matetika ny orinasan'ny lalao board dia manoro hevitra ny ray aman-dreny hisafidy lalao board ...
Ny 24 Solar Terms dia kilalao biraon'ny ray aman-dreny miaraka amin'ny lohahevitry ny kolontsaina Shinoa nentim-paharazana, izay mety ho an'ny olona mihoatra ny 6 taona.Maharitra 30mn eo ho eo ny lalao ary mety ho an'ny olona 2-4.Ankehitriny dia hampahafantatra ny lalao amin'ny antsipiriany amin'ity lalao board ity aho.Dingana fanomanana Voalohany indrindra...
Efa nilalao lalao simulation lavanty ray aman-dreny ve ianao?Araka ny fantatsika rehetra, ny lalao lavanty dia miseho amin'ny fotoana lalao multiplayer amin'ny fiaraha-mientana ara-tsosialy, ny ankamaroan'ny karatra madio, ary ny toetran'ny lalao dia ambany noho ny toetra sosialy.Ary rehefa mifankahita ny lalaon'ny ray aman-dreny sy ny lalao lavanty, inona...